देशभर टिपर आतंक, बनावटै ज्यानमारा
#माध्यमिक शिक्षा परीक्षा
Friday,10 April, 2020 | शुक्रबार, २८ चैत, २०७६
देशभर टिपर आतंक, बनावटै ज्यानमारा लापरवाही बढेकाले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउनसमेत सुरु गरेका छौँ : डीआईजी थापा
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १७ माघ
गोरखामा टिपरले किचेर महिलाको ज्यान गएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि गोरखा अशान्त छ । दूध बिक्रीका लागि बजार हिँडिरहेकी गोरखा नगरपालिका– १०, अमलापानीकी ५२ वर्षीया मनमाया तामाङको टिपरको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बने र गोरखा अशान्त भयो ।
आक्रोशित स्थानीयले २६ वटा टिपर र स्क्याभेटरमा तोडफोड र आगजनी गरे । ग१ख ८०२७ नम्बरको टिपरले किचेर घरबाट छेपेटार बजारमा दूध बेच्न हिँडेकी तामाङलाई शुक्रबार बिहान ७ बजे ठक्कर दिएको थियो ।
दुई दिनअघि मात्रै माघ १५ गते सुर्खेतमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जनाले ज्यान गुमाए । टिपरको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनेमा कालिकोट महावै गाउँपालिका–३, सिमखेतका केशर सिंह थिए । उनी सवार भे१प २१७८ नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएको भे१ख २२४२ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिँदा उनको ज्यान गयो ।
सिंहको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले टिपर आतंकको विरोध गर्दै सडक नै अवरुद्ध पारेका थिए । अवरुद्ध सडक खुलाउन सुर्खेत प्रहरीले गोलीसमेत चलायो । प्रहरीको गोली लागेर एक दर्जनभन्दा बढी घाइतेसमेत भए र हाल घाइते सबैको उपचार भइरहेको छ ।
स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ गते राति कर्फ्यू जारी गर्‍यो ।
यसरी नै एक साताअघि ९ माघमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा समेत टिपरकै ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भयो । ज्यान गुमाउनेमा भीमदत्त नगरपालिका– १५, गोबरैयामा बस्ने २० वर्षीया रमिता भट्ट थिइन् ।
महेन्द्रनगर जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत भट्ट साइकलमा सवार थिइन् । एकै दिशातिर जाँदै गरेको तीव्र गतिको से१क ८८७ नम्बरको टिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
उनी माघ १३ मा हुने आफ्नै विवाहका लागि कार्ड बाँड्न बजार गएकी थिइन् । स्थानीयले टिपर आतंक बढेको भन्दै टिप्परमाथि ढुङ्गामुढा गरेर सडक अवरुद्धसमेत पारे । महेन्द्रनगरमा पनि सडक खुलाउन प्रहरीले केही राउण्ड अश्रुँग्यास प्रहार गर्‍यो ।
टिपरको बनावट नै ज्यानमारा
उपत्यकामा समेत टिपकका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै सरकारले एक वर्षअघिदेखि चक्रपथभित्र टिपर चलाउनै रोक लगाएको छ । ट्राफिक महाशाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चक्रपथभित्र बिहान ७ देखि बेलुका ८ बजेसम्म टिपर चलाउन रोक लगाएको हो ।
त्यसयता उपत्यकामा दिउँसोको समयमा टिपर दुर्घटना घटेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यमा चल्ने टिपरमाथि निगरानी बढाएका कारण टिपर दुर्घटना घटेको ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी जीवन श्रेष्ठको भनाइ छ ।
टिपर चालकहरूका लापरवाहीका कारण देशभर नै टिपर दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ । तर, ट्राफिक प्रहरीमा रहेर लामो समय अनुभव गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथू भने टिपरको बनावट नै ज्यानमारा रहेको बताउँछन् ।
‘टिपरको बनावट नै ज्यानमारा तरिकाले बनेको छ । त्यसमा चालकको लापरवाही पनि त्यति नै हुन्छ,’ हाछेथूले भने, ‘अन्य ठूला सवारीसाधनले मान्छेलाई ठक्कर दिँदा उछिट्टिएर जान्छन् तर टिपरले चक्कामा बेरेर मार्छ ।’
टिपरको अगाडिको भाग र चक्का नै ठूलो बनावटका कारण टिपरसँगको दुर्घटना हुँदा अधिकांशको ज्यान जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
देशभर नै सडक दुर्घटना बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर नै सवारीचालकका लागि जनचेता अभियान चलाएको छ । सडक दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही रहेको भन्दै देशभर नै ट्राफिक जनचेतना अभियान थालेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) शैलेश थापा क्षत्रीको भनाइ छ ।
‘हामीले ट्राफिक जनचेता अभियान देशभर नै चलाएका छौँ, कतिपय सवारी दुर्घटनामा टिपरचालकको गम्भीर लापरवाहीले मान्छेको ज्यान गुमेको छ, त्यस्तो अवस्थामा सवारी ज्यान मात्रै होइन, कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउनसमेत सुरु गरेका छौँ,’ डीआईजी थापाले भने ।
४ वर्षमा ८ हजारभन्दा बढीले गुमाए ज्यान
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर दैनिक साना ठूला गरेर ६० भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ हजार ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यस्तै आव २०७४/७५ मा सवारी दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ३ सयले बढेर २ हजार ५ सय ४० पुगेको छ । आआव २०७५/७६ मा त्यो संख्या बढेर २ हजार ७ यस ८९ पुगेको छ । चालू आवको सुरुदेखि हालसम्म अर्थात् पुस मसान्तसम्म ५ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमध्ये अधिकांश ठूलो सवारीसाधन दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १७, २०७६, ०४:२८:००
हैट ! ‘लोभीपापी’हरु
लकडाउन : स्वर्गद्वारी आश्रम सङ्कटमा
हातखुट्टा नधोई छोराछोरीले भित्र पस्न दिँदैनन् !
यसरी पक्राउ परे थर्मोगन कालो बजारी गर्ने अर्बपति अग्रवाल
नेपाल प्रहरीका डीआईजीको दरबन्दी कटौती, प्राविधिकबाहेक अब १३ जना मात्र
सेनाले मेडिकल सामग्री खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने, ३ देशमा पत्र पठाउने तयारी
कोरोना कहर : सबैभन्दा सुरक्षित गोल घरका कैदी, नयाँ कैदीले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने
उपचारपछि घर फर्किए साढे ३ लाख कोरोना संक्रमित
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्प्रे मेसिन सहयोग
ट्रम्पले भने, ‘कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लाग्यो’
जापान, कोरिया र बेलायतका नागरिक आज फर्काइदै, ४ चार्टर्ड उडान हुने
जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
‘आगामी साता सेप्टेम्बर ११ जस्तो दुःखद घटना हुन सक्छ’
आईसोलेसनमा मृत्यु भएका बावुरामको ९ दिनसम्म शव नउठ्नुको यस्तो छ कारण
अमेरिकामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेबारे ट्रम्पले गरे यस्तो खुलासा
अस्पतालको छैटौँ तलाबाट भाग्न खोज्दा कोरोना शंकास्पद बिरामीको मृत्यु
लकडाउन दैनिकीः कतै फुल्दै, कतै थप खुल्दै